Ọ Gbakere Mgbe O Metụrụ Uwe Jizọs Aka | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
MATIU 9:18-22 MAK 5:21-34 LUK 8:40-48
OTU NWAANYỊ GBAKERE MGBE O METỤRỤ UWE JIZỌS AKA
Akụkọ gazuru ebe niile ndị Juu bi ná mpaghara ọdịda anyanwụ nke ụsọ Oké Osimiri Galili na Jizọs esila Dikapọlis lọghachi. Ọ ga-abụ na ọtụtụ ndị anụla na Jizọs mere ka oké ifufe na ebili mmiri dajụọ, chụpụkwa ndị mmụọ ọjọọ n’ahụ́ ndị ha ji. N’ihi ya, “oké ìgwè mmadụ” zukọtara n’akụkụ oké osimiri ahụ ka ha nabata Jizọs. O nwere ike ịbụ na ebe ha zukọrọ bụ ná mpaghara ya nke dị na Kapaniọm. (Mak 5:21) Ha nọ na-atụsi anya ya ike ka o si ná mmiri ahụ pụta.
Otu n’ime ndị ọ na-agụsi agụụ ike ịhụ Jizọs bụ Jeirọs, onyeisi ụlọ nzukọ ndị Juu. Nwoke ahụ dara n’ala n’ụkwụ Jizọs, na-arịọsi ya arịrịọ ike, sị: “Obere nwa m nwaanyị nọ n’ọnọdụ dị oké njọ. Biko, bịa bikwasị ya aka ka o wee gbakee ma dị ndụ.” (Mak 5:23) Nwa Jeirọs a dị naanị afọ iri na abụọ, bụrụkwa naanị nwa o nwere. O jighịkwa nwa ya a egwu egwu. Olee ihe Jizọs ga-eme gbasara arịrịọ a Jeirọs rịọsiri ya ike ka ọ bịa nyere nwa ya a aka?—Luk 8:42.
Jizọs gawara n’ụlọ Jeirọs. Ka ọ nọ na-aga n’ụzọ, e nwere ihe ọzọ na-emetụ n’ahụ́ merenụ. Ọtụtụ ndị só Jizọs na-aga nọ na-enwe ezigbo obi ụtọ, na-eche ma hà ga-ahụ ka Jizọs rụrụ ọrụ ebube ọzọ. Ma, e nwere otu nwaanyị so n’ìgwè mmadụ ahụ. Ihe na-echu yanwa ụra bụ ọrịa ọjọọ na-arịa ya.
Kemgbe afọ iri na abụọ, nwaanyị a bụ́ onye Juu, nọ na-arịa ọrịa oruru ọbara. Ọ gaala ọtụtụ ụlọ ọgwụ ka ndị dọkịta nyere ya aka, mefusịakwa ego niile o nwere n’ọgwụ ndị ha gwara ya ṅụọ. Ma, o nwebeghị nke nwere isi. Kama, nsogbu ya bịara ‘kakwuo njọ.’—Mak 5:26.
Nke bụ́ eziokwu bụ na ọrịa ya a na-eme ka ike na-agwụ ya, na-emekwa ya ihere. Onye ụdị ọrịa a ji anaghị ekwu banyere ya ebe ndị mmadụ nọ. Ihe ọzọkwa bụ na n’Iwu Mozis, oruru ọbara na-eme ka nwaanyị ghara ịdị ọcha. Onye bitụkwara nwaanyị dị otú ahụ aka, ma ọ bụ metụ uwe ya ọbara gburu aka, ga-asa ahụ́ ma bụrụ onye na-adịghị ọcha ruo mgbede.—Levitikọs 15:25-27.
Nwaanyị a ‘anụla ihe banyere Jizọs,’ chọtakwa ya ugbu a. N’ihi ọrịa na-arịa ya, o heere ehere si n’etiti ìgwè mmadụ ahụ na-aga n’ebe Jizọs nọ. Ọ nọ na-agwa onwe ya, sị: “Ọ bụrụ na m bitụ naanị uwe elu ya aka, m ga-agbake.” Mgbe o bitụrụ ọnụ ọnụ uwe Jizọs aka, ọ chọpụtara ozugbo na oruru ọbara ya akwụsịla, na “a gwọwo ya ọrịa ọjọọ ahụ.”—Mak 5:27-29.
Mgbe ahụ Jizọs sịrị: “Ònye bitụrụ m aka?” Olee otú i chere obi ga-adị nwaanyị a mgbe ọ nụrụ ihe a Jizọs jụrụ? Pita kwuru okwu ka à ga-asị na ọ na-abara Jizọs mba. Ọ sịrị: “Ìgwè mmadụ gbara gị gburugburu ma na-adagide gị.” Gịnịzi mere Jizọs ji jụọ, sị: “Ònye bitụrụ m aka?” Jizọs kwuru ihe mere o ji jụọ ajụjụ ahụ. Ọ sịrị: “Ọ dị onye bitụrụ m aka, n’ihi na m ghọtara na ike pụrụ m n’ahụ́.” (Luk 8:45, 46) N’eziokwu, ọgwụgwọ ahụ a gwọrọ nwaanyị ahụ mere ka ike pụọ Jizọs n’ahụ́.
Ụjọ jidere nwaanyị ahụ mgbe ọ matara na Jizọs achọpụtala ihe o mere. Ọ dara n’ala n’ụkwụ Jizọs na-ama jijiji. Ọ nọ n’ihu mmadụ niile kwuo eziokwu banyere ọrịa ya, kwuokwa na ahụ́ adịla ya mma. Jizọs mere ka obi ruo ya ala. Ọ sịrị ya: “Nwa m nwaanyị, okwukwe gị emewo ka ahụ́ dị gị mma. Laa n’udo, gbakee n’ọrịa ọjọọ nke na-arịa gị.”—Mak 5:34.
N’eziokwu, Onye Chineke họpụtara ga-achị ụwa n’ọdịnihu nwere ọmịiko. Ọ bụghị naanị na ihe banyere ndị mmadụ na-emetụ ya n’ahụ́, o nwekwara ikike inyere ndị mmadụ aka.
Gịnị mere ndị mmadụ ji bịa ikele Jizọs mgbe ọ lọghachitere Kapaniọm?
Olee nsogbu otu nwaanyị nwere, gịnịkwa mere o ji chọọ ka Jizọs nyere ya aka?
Olee otú nwaanyị ahụ si gbakee, oleekwa otú Jizọs si mee ka obi ruo ya ala?
Ò Nwere Mgbe Nsogbu Ụwa A Ga-akwụsị?
Baịbụl kwuru na Chineke kpọrọ ikpe na-ezighị ezi asị nakwa na ihe gbasara ụmụ mmadụ na-emetụ ya n’obi. Olee uru ihe a ga-abara gị?